सोमबार, २७ बैशाख, २०७८, राष्ट्रिय डेली
काठमाडाैँ, २७ वैशाख । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरेको छ । सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले जेठ १३ गतेबाट सञ्चालन हुने एसईई र जेठ २६ गतेबाट हुने कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्को सूचना नभएसम्मका लागि दुवै परीक्षा स्थगित गरिएको बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिए ।
विद्यार्थी संगठनद्वारा विराटनगरमा प्रदर्शन, पेट्रोलपम्पसमेत बन्द
विराटनगर । विभिन्न पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले बुधबार बिहानैदेखि पेट्रोलपम्पहरू बन्द गराएका छन् । नेपाल आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि खारेजी हुनुपर्ने माग गर्दै पाँच विद्यार्थी सङ्गगठनले विराटनगरका पेट्रोलपम्पहरू बन्द गराएका हुन् । नेपाल विद्यार्थी...
नेपालमा २२ जनामा कालोढुसी संक्रमण, छैन औषधि
काठमाडौं, असार १८ गते । कोभिड संक्रमण पुष्टि भएका बिरामीमा देखिएको म्यूकर माईकोसिस (कालो ढुसी) का संक्रमितहरु नेपालमा अहिलेसम्म २२ जना देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.समिर अधिकारीका अनुसार...
बेलबारी बाख्रा प्रकरण : नगरपालिकाले सुटुक्क तिर्यो गोप्य रूपमा ‘डिनर मिटिङ’ गरेको बिल !
बेलबारी । मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले बाख्रा किन्ने ठेक्का पाएको ग्रो अर्गानिक कृषि प्रालि सङ्खुवासभासँगको गोप्य रूपमा ‘डिनर मिटिङ’ गरेको बिल तिरेको छ । फुल ब्लड बोयर भन्दै क्रस बोयर बाख्रा खरिद गरी अनियमितता प्रकरणमा मुछिएको...
उदयपुरबाट गाँजासहित युवती पक्राउ
उदयपुर, १४ असार । उदयपुरबाट गाँजा सहित युवती पक्राउ परेकी छन् । बेलका नगरपालिका-८ कोठु स्थितबाट १ केजी गाँजासहित भोजपुर हचुवागढी ४ कि १९ बर्षीया सुजता मग्राती गाँजासहित पक्राउ परेकी हुन् । हिजो बेलुका ४...
प्रदेश १ मा १ हजार ३१० संक्रमणमुक्त हुँदा ४८६ जनामा कोरोना पुष्टि
विराटनगर । प्रदेश १ बाट आज १ हजार ३१० जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । संक्रमणमुक्त हुनेमा ५२४ महिला र ७८६ पुरुष रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४८ हजार ५५३ जना...
१० खेलाडीमा सीमित नेपाल अस्ट्रेलियासँग पराजित
विराटनगर । फिफा विश्वकप २०२२ कतार तथा एएफसी एसियन कप २०२३ चीनको संयुक्त छनोटअन्तर्गत दोस्रो चरणमा नेपाल आफ्नो अन्तिम खेलमा पराजित भएको छ । शुक्रबार १० खेलाडीमा सीमित नेपाललाई अस्ट्रेलियाले ३-० गोलले पराजित गर्‍यो। कुवेत...
प्रदेश १ मा ४६२ सङ्क्रमित थपिँदा ९०२ जना कोरोनामुक्त
विराटनगर, २८ जेठ । प्रदेश १ बाट ९०२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । संक्रमणमुक्त हुनेमा ३८९ महिला र ५१३ पुरुष रहेका छन् । हालसम्म संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या ४७ हजार २४३ जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले...
प्रदेशमा पहिलो चरणमा तीन लाखले खोप लगाए : मुख्यमन्त्री राई
विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा पहिलो चरणमा तीन लाखले खोप लगाएको जानकारी दिएका छन् । सोमबारबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको आठौं तथा बजेट अधिवेशनमा सम्बोधन क्रममा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्...
असार १ गतेबाटै नयाँ शैक्षिक सत्र !
काठमाडौँ । भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन नभए पनि २०७८ सालको शैक्षिक सत्र असार १ गतेबाटै सुरु गरिने भएको छ । विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गरी असार १ गतेबाट विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्रको...
मोरङमा फेरि सात दिन निषेधाज्ञा थपियो
विराटनगर, १६ जेठ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पुनः साता निषेधाज्ञा थपिएको छ । कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्नेक्रम यथावतै रहेको भन्दै प्रशासनले जेठ १७ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी २४ गते राति १२ बजेसम्म...
सिनेमा हलमा गोप्य रुपमा एमाले कार्यकर्ता र उद्योगीलाई खोप
विराटनगर, १४ जेठ । विराटनगरको सिटी सिनेमा हलमा उद्योगीहरूलाई सुटुक्क कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । कोरोना महामारीविरुद्ध अग्रमोर्चामा खटिएकाले दोस्रो डोजको खोप नपाइरहेको अवस्थामा नेकपा एमाले पार्टी समर्थक र केही...
विराटनगरबाट लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ
विराटनगर । मोरङको विराटनगर महानगरपालिका-१६ दरैयास्थितबाट लागुऔषधसहित १ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ पर्नेमा विराटनगर-१६ दरैयाकै ४३ वर्षीय सज्जु साही रहेका छन् । आइतबार बेलुका ९ बजे दरैया पोष्टबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई लागुऔषधसहित...
हुन्डी कारोबारमा संलग्न तीन जना पक्राउ
विराटनगर, ६ जेठ । हुण्डी कारोबारमा संग्लग्न रहेको आरोपमा तीन जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा विराटनगर–१३ का २५ वर्षीय श्रवण साह, रंगेली नगरपालिका–१ की २५ वर्षीय जिज्ञासा चौधरी र...
एसइई परीक्षा आन्तरिक मूल्यांकनको अधारमा गर्न सिफारिस
काठमाडौँ, ६ जेठ । कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) तथा आन्तरिक मूल्यांकनको अधारमा गर्न सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा. चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षाको मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले आन्तरिक...
एसइई तथा कक्षा १२ : परीक्षा मोडालिटीको अध्ययन गरिँदै
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । सरकारले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) तथा कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरेको छ । आठ लाखभन्दा विद्यार्थीलाई कोरोना (कोभिड–१९)को सङ्कट...
धेरै खट्यो भने सस्तो लोकप्रियता भन्छन् : मेयर पराजुली
विराटनगर, ४ जेठ । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीलाई सस्तो लोकप्रियताको ट्याग लगाइएको छ । कोभिड महामारीबीच दिनरात नभनी खटिएका उनलाइ धेरैले सामाजिक सञ्जालमार्फत सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गरेकाे अाराेप लगाइएकाे छ । विराटनगरका उच्च...
बलात्कार आरोपी भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष यादवलाई थुनामा राख्न आदेश
सुनसरी । जिल्ला अदालत सुनसरीले १७ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा वैशाख ८ गते पक्राउ परेका भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । यादव विरुद्ध सुनसरी जिल्ला अदालतमा आइतबार जबरजस्ती...
प्रदेश १ मा आज १७६ जना कोरोनामुक्त
विराटनगर, ३ जेठ । प्रदेश १ मा सोमबार १ हजार १ सय ४० जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । दैनिक संक्रमण संख्याको आधारमा यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो । थप २ हजार २ सय ७०...
मास्क र हल्मेटबिनै हिँड्छन् जनप्रतिनिधि
विराटनगर, ३ जेठ । दोस्रो लहरको कोरोना महामारी फैलिएसँगै देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यसक्रममा सुरक्षाकर्मीले सुरक्षाव्यवस्था कडा पारेका छन् । सर्वसाधारण व्यक्तिलाई प्रहरीले आवत–जावतमा पूर्ण रोक लगाएका छन् । तर जनप्रतिनिधि...
देवानगञ्जमा निषेधाज्ञामा पनि रोकिएन तेल तस्करी, स्थानीय मिलेर तस्करमाथि कुटपिट
विनोद मेहताविराटनगर, ३ जेठ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरपछि स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञामा पनि सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा इन्धन तस्करी हुनेक्रम रोकिएको छैन । सोमबार बिहान देवानगञ्ज–२ मा एक तस्करले करिब २२० लिटर डिजेल भारततफै...
मदन भण्डारी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका नविन विचारक हुन्ः सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ
नेपालमा आज सोमबार २८ औं मदन भण्डारी- जीवराज आश्रित स्मृति दिवस मनाइदैछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मदन-आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा स्वर्गीीय मदन भण्डारी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको नविन विचारक भएको बताउनुभएको छ...
विराटनगरमा ५१ बेडको आइसोलेसन बन्यो
विराटनगर, १ जेठ । अस्पतालहरूमा बेड अभाव भइरहेका बेला विराटनगर महानगरले अस्पताल बराबरको आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरेको छ । विराटनगर महानगरका मेयर भीम पराजुलीको विशेष सक्रियतामा विराटनगर–१ स्थित भट्टा चोकमा रहेको आरआरएनको सभाहलमा ५१ बेडको...
सुनसरीमा निषेधाज्ञालाई कडा बनाउन सेना परिचालन
सुनसरी, १ जेठ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले निषेधाज्ञामा कडाइ गर्दै जिल्लाका ३ सहरहरूमा सेना परिचालन गरेको छ । निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै सेना परिचालन गरिएको हो । सुनसरीका प्रमुख...
मोरङमा १० दिन निषेधाज्ञा थप
विराटनगर, ३१ वैशाख । मोरङमा पुनः १० दिन निषेधाज्ञा थपिएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले जेठ १ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी १० दिन निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो । मोरङका प्रमुख जिल्ला...
शुक्रबार प्रदेश एकमा सार्वजनिक बिदा
विराटनगर, ३० वैशाख । प्रदेश नं १ मा शुक्रबार मुस्लिम धर्मालम्बीको महान् चाड ईद (इदुल्ल फित्र) को अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । बिहीबार प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै ईदको...
जून र आमा (कविता)
–मीनकुमार नवोदितआकाशमा जून टल्कँदाम मेरी आमालाई सम्झन्छुआमाको निधारको टीकाआमाको चौबन्दी चोलीर सम्झन्छु फाट्नै लागेको पटुकी ।आँगनको डिलमा उभिएर आमामाथि आकाशमा टहटह टल्किएकोजून देखाउनु हुन्थ्योपारि मूलडाँडामा–राँको बालेर उकालो उक्लँदै गरेकाभरियाका धमिलो आकृति देखाउनु हुन्थ्योर, भन्नुहुन्थ्यो–बाबु साह्रै...
एसइई र कक्षा १२ को परीक्षा १५ दिनपछि नयाँ मिति र मोडालिटी तय गरिने
काठमाण्डौं, २७ वैशाख । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा–एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा अर्को सूचना नआउँदासम्मका लागि स्थगित भएको छ । यस वर्षको एसईई परीक्षा जेठ १३ गतेदेखि र कक्षा १२ को परीक्षा जेठ...
उदयपुरमा आगलागी, पाँच घर जलेर ध्वस्त
उदयपुर, २६ वैशाख । उदयपुरकाे चौदण्डीगढी नगरपालिकामा आगलागीबाट पाँच घर जलेर ध्वस्त भएका छन् । आइतबार चौदण्डीगढी नगरपालिका-८ वीरेन्द्र बजारमा भएको आगलागीबाट पाँच घर जलेर ध्वस्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । आज...
विराटनगरका कुन अस्पतालमा कति बेड खाली छन् ?
विराटनगर, २२ वैशाख । विराटनगरका कोशी अस्पताल र दुई निजी अस्पतालले कोभिड–१९ उपचार केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन् । नोबेल मेडिकल शिक्षण अस्पताल र बूढीगंगाको विराट मेडिकल शिक्षण अस्पतालले कोरोना उपचार केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन् ।...
क्याम्पस प्रमुख तिमल्सिनालाई दोहोरियो कोरोना संक्रमण
विराटनगर, २२ वैशाख । विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डाक्टर बाबुराम तिमल्सिनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुनः दोहोरिएको छ । मङ्गलबार उनमा नयाँ भेरियन्टको कोरोना पुष्टि भएको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ । यसअघि पहिलो...
काठमाडौँ केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प
काठमाडौँ, १५ वैशाख । काठमाडौँको कलंकीलाई केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ । मंगलबार राति १ बजेर ५९ मिनेटमा कलंकी केन्द्र बनाएर भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र, लैनचौरले जनाएको छ । भूकम्पको मापन ३.५ म्याग्नेच्यूडमा...
साताको साहित्य : विनय सरगमका तीन कविता
विराटनगर, ६ वैशाख । इटहरी तरहराका विनय सरगम मोफसलमा बसेर कविता लेखनमा सक्रिय छन् । ‘अनुहारको भिड’ संयुक्त कविता संग्रहमार्फत आफ्ना सशक्त कविता प्रस्तुत गरेका सरगमले पूर्वेली गजल संग्रहसमेत सम्पादन गरिसकेका छन् । छोटो समयमै...
कोरोना संक्रमित लाई विराटनगरका आधा दर्जन अस्पताल घुमाइयो, उपचार नपाएर मृत्यु !
विराटनगर, ६ वैशाख । आरडिटी पोजेटिभ देखिएका बिरामीलाई विराटनगरका अस्पताल फनफनी घुमाउँदा पनि उपचार नपाएर मृत्यु भएकाे छ । आरडिटी परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएका उदयपुरका एक बिरामीको उपचार नपाएर सोमबार मृत्यु भएको हो । कोरोना...
काठमाडौँ, ६ वैशाख । सरकारले वैशाखभर विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाखभर सार्वजनिक तथा निजी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री डा....
‘बोकेदाह्री’को फरक प्रयास : आज बिहेमा आको छु (भिडियोसहित)
विराटनगर, ५ वैशाख । हास्य–व्यङ्ग्य गायक श्रीकृष्ण लुइँटेल ‘बोकेदाह्री’ले नयाँ गीत बजारमा ल्याएका छन् । आइतबार उनले ‘आज बिहेमा आको छु’ बोलको गीत युटुबमा सार्वजनिक गरेका हुन् । श्रीकृष्णको आधिकारिक युटुब च्यानलमार्फत उक्त गीत भने...
स्वास्थ्य विज्ञ भन्छन् : भोलिदेखि नै विद्यालय बन्द गरौँ
.विराटनगर, ५ वैशाख । कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो चरणको लहर बढ्दो छ । यसक्रममा कोरोना भाइरस कोभिड १९ को जोखिमलाई मध्यनजर गरी केही स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गरिसकेका छन् भने केहीले बन्द गर्ने तरखर गर्दै...
विद्यार्थीमा नयाँ प्रजातिको कोरोना देखिएपछि इनरुवाका विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द
इनरुवा, ५ वैशाख । सुनसरी सदरमुकाम समेत रहेको इनरुवा नगरपालिका क्षेत्रमा कोरोना भाईरस कोभिड १९ को जोखिमलाई मध्यनजर गरी विद्यालयहरु बन्द गरिएको छ । नगर क्षेत्रभित्रको एक विद्यालयका विद्यार्थीमा नयाँ प्रजातिको कोरोना देखिएपछि विद्यालय अनिश्चितकालका...
साहित्यकार नवोदितसहित तीन जना सम्मानित
विराटनगर, ३० चैत । विराटनगर–१२ स्थित लेखनाथ वाचनालयले साहित्यकार मीनकुमार नवोदितसहित विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ । सोमबार वाचनालयले १७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा साहित्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याएबापत नवोदितलाई सम्मान गरेको हो ।...
जुवातास खेल्ने वातावरण मिलाइदिनु भन्दै प्रहरीलाई घुस दिन खोजेपछि…
जनकपुरधाम, २४ चैत । धनुषामा प्रहरीलाई घुस दिन खोज्ने एक जनालाई आज पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धनुषाको सबैला नगरपालिका २ का ३७ वर्षीय मुकेश पुर्वे रहेका छन् । पूर्वेले जुवातास खेलाउने वातावरण मिलाइदिनु...
भारतमा गएको भूकम्पले चितवनमा पुल भत्किएको आशंका
चितवन, २४ चैत । भरतपुर महागनरपालिका–१ ठिमुरा र तनहुँको देवघाट गाउँपालिका जोड्ने त्रिशुली नदी माथि निर्माणाधीन पक्की पुल भत्किएको छ । सोमबार राति भारतमा गएको भूकम्पको धक्का नेपालमा समेत महसुस गरिएपछि उक्त पुल सोही कारण...
कोरोना संक्रमण बढे पनि एसइईलगायत सबै परीक्षा तोकिएकै समयमा हुने !
काठमाडौं, २४ चैत । दोस्रो चरणको कोरोना महामारी बढ्दै गए पनि एसइईलगायत विद्यालय तहका सबै परीक्षाहरु तोकिएकै समयमा सञ्चालन हुने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले दोस्रो चरणको कोरोना महामारी...
विराटनगर, २३ चैत । पूर्वी नेपालसहित देशैभरि भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । सोमबार बेलुका करिब ९ः५ बजे भुकम्पको धक्का महसुस गरिएको हो । तथापि, भूकम्प कति रेक्टर स्केलको गएको भन्ने पूर्णजानकारी आएको छैन ।
सामूहिक नाटक गर्दै धराने युवा रङ्गकर्मीहरू
धरान, २१ चैत । पछिल्लो समय धरानलाई कर्मक्षेत्र बनाएर विभिन्न नाट्य समूहसँग आवद्ध भएर रङ्गमञ्चमा लागि लागिपरेका युवा रङ्गकर्मीहरूले सामूहिक नाटक गर्ने भएका छन् । युवा रङ्गकर्मीहरूको ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजको सेमिनार हलमा भएको परिचयात्मक...
बालबालिकाको मेकअप हानिकारक
काठमाडौंँ, १९ चैत । बालबालिकाको शृङ्गार (मेकअप) स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने विशेषज्ञहरूको सुझाव छ । मेकअपका कारण उनीहरूको छालासम्बन्धी विभिन्न रोग आउने तथा आत्मविश्वास हराउने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ । पार्वती कार्की टिकटककी पारखी छिन् । उनले लकडाउनको...
‘नेपालका लागि खेल्नु मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा’
काठमाडौँ, १७ चैत । नेपालमा लिजेन्ड खेलाडीहरूले अपेक्षाअनुरूप बिदाइ नपाएका धेरै उदाहरण छन् । ती उदाहरण सम्झने हो भने नेपालका ‘लिजेन्ड’ फुटबलर विराज महर्जनलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ  । विराजले सोमबार नेपालका लागि सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने फुटबलर...
प्रत्येक वर्ष सभ्य तरिकाले मनाइँदै होली
विराटनगर, १६ चैत । फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु पूर्णिमा (होली) पर्व केही वर्षअघिसम्म मानिसको इच्छाविपरीत रङ दल्ने पानीका लोला हान्ने गरिन्थ्यो । तर, तराइ जिल्लामा प्रत्येक वर्ष क्रमशः सभ्य रूपमा मनाउन थालिएको छ...
बेलकामा मोटरसाइकल दुर्घटना, तीन जना घाईते
उदयपुर, ९ साउन । मदन भण्डारी लोकमार्ग अन्र्तगत बेलका नगरपालिका – ६ स्थित बुद्ध चोकमा दुई मोटरसाइकल एकआपसमा दुर्घटना हुँदा तीन जना घाईते भएका छन् । पुर्वबाट पश्चिम तर्फ जाँदै गरेको को २७ प ५९४...
बेलका स्वतन्त्र युवा समाजद्वारा रामपुर र लालबजार क्षेत्रको सरसफाई
शिब प्रसाद लुईटेल उदयपुर, ९ साउन । रामपुर र लालबजार क्षेत्रमा बेलका स्वतन्त्र युवा समाजले सरसफाई गरेको छ । ‘नभुलौ आफ्नो जन्मभुमी, नभुलौ आफ्नो मातृत्व, स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने, हामी युवाको दायित्व’ भन्ने मुल नाराका...
भारत लैजाँदै गरिएकी एक चेलीको विराटनगरबाट उद्धार, एक युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा
विराटनगरको सीमा हुँदै जोगबनी तस्करी गर्न लागिएको एक चेलीलाई आफन्त नेपालले उद्धार गरेको छ । शुक्रबार बिहान करिब १० बजेतिर विराटनगर महानगरपालिका–१६ दरहिया हुँदै बाँके जिल्लाको कोहलपुर पासाङ्लाम्हु रोड घर भएकी २१ वर्षीय कमला सहनी...
गण्डकीमा ६ मन्त्रीले लिए शपथ
कास्की, ८ साउन । गण्डकी प्रदेशमा नवनियुक्त ६ मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएकी हुन् । कांग्रेसबाट मणिभद्र शर्माले पर्यटन, उद्योग,...
सूचना विभाग द.नं. ——-